दशैँ लगाउने ती दुई टेलिसिरियल(भिडियो सहित ) - Everest Talk
दशैँ लगाउने ती दुई टेलिसिरियल(भिडियो सहित )1 min read
दशैं विशेष :
केही कुरा दशैँसँग जोडिएर चर्चीत छन् । यसो हेर्दा लाग्छ, यिनीहरूको आयु अन्तन्तै लामो छ । कहिल्यै पुराना हुँदैनन् । हुन त जे पुराना छन्, त्यो कुराको महत्व अर्कै छ ।
पुराना कुराको महत्व जे भए पनि त्यसको अर्थले महत्व बोकेको हुन्छ । यी त भए देखिएका कुरा ।
हामी कुरा गर्दैछौँ ती दुई टेलिसिरियलको जसले नेपाली मनोरञ्जनलाई सधैँ शिरमा राखेर दौडिएका छन् । प्रत्येक दशैँमा यो सिरियल नहेरेसम्म दशैँको पूर्णता नै नहोला कि भन्ने कुरामा हामी छौँ ।
नारायण त्रिपाठीको टेलिचलचित्र “नेपाली कमेडी टेलिसिरियल विथ नारायण त्रिपाटी” नामको टेलिसिरियल “क्यानडा नेपाल डट नेट” नामको युट्युब च्यानलमा आजभन्दा सात वर्षअगाडि नै अपलोड भए पनि यो सिरियल आज पनि आफ्नै बेग्लै इतिहास बोकेर उभिएको छ । लगभग दुई पुस्ता बोकेर हिँडिरहेको यस टेलिसिरयलले आज पनि आफ्नै चर्चाको पहाड बोकेर उभिएको छ । सायदै, यो प्रश्न गर्न सकिएला कि यो टेसिरयल नर्हेनेको बाल्यकाल कस्तो होला ?
सामान्य जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको अवस्थालाई समेटेर बनाइएको यस टेलिचलचित्रमा एक पात्रलाई दुःखित र ठकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सामान्य जीवनमा बाँचनेहरूले देखासिकी गरेर कसरी दशैँ मनाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई खुलस्त गरिएको छ । मान्छे कति दुःखी हुन सक्छन् भन्ने कुरामा आधारित यस टेलसिरियलमा मान्छे कतिसम्म मूर्ख छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा देखाइएको छ । मान्छेले कतिसम्म चतुर्याईँ गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको छ । यस्तै विविध कुरामा रहेको यस टेलिसिरियले हाम्रै समाजको कथालाई पर्दामा उतारेको भान हुन्छ ।
अर्को त्यस्तै टेलिसिरियल हो नेपाली हास्यव्यङ्गको महारथी मह जोडीको “दशैँ” नामक टेलिचलचित्र । यस “दशैँ” टेलिचलचित्रलाई मह सञ्चारले तीन वर्षअगाडि मात्र युट्युबमा प्रसारण गरे हो । तर पनि यसले नेपाली दर्शकबीच निकै लामो इतिहास बोकेर खडा भएको कुरा हामी सबैलाई विदतै नै छ । मह जोडीले समाजका कुरा अभिनयमा दुरुस्त उतारेर नै लोकप्रिय भएका हुन भन्ने पनि एकातिर जमात छ भने अर्कातिर उनीहरूको अभिनयलाई अँगाल्ने पनि जमात उत्तिकै रहेको छ ।
दशैँ टेलिसिरियलमा नेपालकै समस्या देखाइएको छ । त्यसैले पनि यसलाई नेपाली दर्शकले निकै लोकप्रिय बनाएका हुन कि भनेझैँ लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।
यसमा नेपालीकै समस्यालाई उठाएर नेपालको राजनीतिलाई धेरै मीठो तरिकाबाट व्यङ्ग गरिएको छ । निकै दशक अगाडि बनेको यस टेलिसिरियलमा देखाइएको राजनैतिक घोचपेज अहिलेको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिलेको देखिन्छ ।
सानाले सधैँ हेपिनु पर्ने र ठूलाबडाले सानालाई सधैँ पेल्नु पर्ने अवस्था देखाइएको यस टेलिसिरियलको मुख्य भूमिकामा हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । हाकिम र पियनको चरित्रमा देखिएका मह जोडीले यहाँ हँसाएका मात्र छैनन् कि प्रत्येक दशैँमा नेपालीले भोग्नु परेको पीडा, देखासिकी गर्ने चलन र राजनैतीक घुस कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरेका छन् ।
मथि प्रस्तुत यी दुई टेलिसिरियल प्रत्येक दशैँमा सपरिवार बसेर हेर्ने चलन धेरै अघिको हो । दूरदराजमा अझै पनि उस्तै छ । यस्ता टेलिसिरियल अब बन्लान कि नबन्लान ? त्यो समयले बताउला । तर यो टेलिसिरियलले नेपाली दर्शकमाझ भुल्नै नसकिने छाप छाडेको छ ।